Uzungezisa kanjani ama-degree angama-45 kupende? - Imicrosoft
Main > Imicrosoft > I-Microsoft paint rotate - ungayilungisa kanjani
I-Microsoft paint rotate - ungayilungisa kanjani
Uzungezisa kanjani ama-degree angama-45 kupende?
Noma cindezela u-Ctrl + W. Bese Skew isithombe sakho ngokuvundla kwesokudlaIziqu ezingama-45. Kubukeka kukuhle!
Sawubona, nginguHelen Bradley.
idivayisi ayilungiselelwe null
Uyemukelwa kulesi sifundo sendatshana. Kulesi sifundo sizoxazulula ezinye zezimfihlakalo zokujikeleza umbhalo ku-Microsoft Word. Ngaphambi kokuthi siqale lesi sifundo, ake sibone ukuthi yini esizama ukuyenza.
Esizama ukukwenza ukushintshanisa umbhalo ekhasini, ngisho noma kungama-degree angama-180 noma ama-degree angama-90 ekhasini, kepha singafuna ukushintshanisa umbhalo wethu ngokushintshanisa okuhlukile. Lokhu nje akungiphathi kahle okwamanje, kepha singahle sithande ukushintshanisa umbhalo wethu ube ama-degree angama-45 noma elinye inani futhi lokho bekungelula. Ezinguqulweni zangaphambili ze-Word ezisuka ku-Word 2007 zibuyela emuva, kufaka phakathi ngeshwa i-Word 2007, ayikho kulezi zinketho, eyodwa kuphela yalezi zinketho empeleni ibitholakala kithi.
Kepha ngizoqala ngeZwi 2013 ngoba kunezinketho eziningi ku-Word 2013, bese ubuyela ku-Word 2007 ngomzuzu bese ubona ukuthi yiziphi izinketho onazo nge-Word 2007 ne-Word 2003. Manje ngo-2013 kukhona amathani ongakhetha kukho. Enye yazo I-nsert Textbox, ngiqonde ukuthi ungavele udwebe ibhokisi lombhalo esikrinini bese unamathisela umbhalo wakho lapha.
Amabhokisi wombhalo manje angazungeziswa. Ngakho-ke singakwazi ukuziphendulela kunoma yiliphi ibanga futhi uyabona ukuthi umbhalo onebhokisi lombhalo awuzungezi njengamaphethelo, kulungile. Amathuluzi Wokudweba, Fomatha ithebhu, Uhlaka, Awukho Uhlaka futhi manje umbhalo wakho uzoshintshaniswa kodwa awukwazi ukubona uhlaka lwebhokisi elikulo.
Ungawufomatha umbhalo wakho, kunjalo, nanoma imuphi umbhalo esikhuluma ngawo kunoma iyiphi yalezi zinto ungafomethwa ngosayizi nangebala nangefonti, njll. Ngakho-ke inkambu yombhalo ingenye yezinketho zakho.
Enye yezinketho ukwakheka, faka ubujamo bese ukhetha umumo, ngizokhetha leyo ndlela lapha, ngidwebe esikrinini, ngifake umbhalo wami, ngiwukhulise ngangokunokwenzeka ngezinye izinketho bese sikwazi ukukujikeleza . Ngakho-ke sibamba umumo futhi lapho sizungezisa umumo, umbhalo nawo uzungeziswa. Lokhu akusenjalo kuZwi 2007 noma iZwi 2003.
Injini entsha yehluzo ku-Word 2010 allo Sikwenzile lokhu, ngakho-ke singakuthola ngo-2010 nango-2013. Lokho kungenye indlela. Umumo ngamunye unganikezwa umbhalo futhi uzungeziswe.
Enye yezinketho esisebenzise ngaphambili ayiseyona ekhangayo kangako ngoba sinezinye izinketho eziningi yi-WordArt, Faka i-WordArt. Futhi simane sikhethe eyodwa yalezi zinto ze-WordArt bese singafaka umbhalo wethu lapha. Futhi lokhu kungazungeziswa futhi kufomethwe.
Ingaguqulwa ibhekiswe phansi. Njengoba ngishilo, ngokwesiko kwakungenye yezinketho esasinazo zokushintshanisa umbhalo ngoba wawumuhle kakhulu kuwo. Kepha manje sinezinye izinketho eziningi kakhulu okungadingeki ukuthi sisebenzise i-WordArt.
Manje kunenye inketho ongayisebenzisa. Akuyona engiyithanda kakhulu, kepha kuyindlela futhi lokho kuyithebula elilodwa lamaseli. Leli yitafula elinomugqa owodwa nekholomu eyodwa futhi ngiwubeke umbhalo wami kulo.
Ngombhalo wami, ngingakhetha i-Table Tools, i-Layout ithebhu bese ngiqhafaza leyo ndlela yokuqondisa umbhalo, bese kunezindlela ezintathu zokuzungezisa umbhalo kuleli thebula leseli elilodwa. Kepha njengoba ngishilo, lokhu kuyindlela elula kunazo zonke kulezi zinsuku ngoba sinezinye izinketho eziningi ezinhle kakhulu ku-Word 2010 nango-2013. Kepha manje ake sibuyele emuva esikhathini futhi sibuyele emuva ku-Word 2007 ngoba izinto azijabulisi neze. eZwini 2007.
Masiqale kuqala ebhokisini lethu lombhalo, faka ibhokisi lombhalo, udwebe ibhokisi lombhalo, udwebe ibhokisi lombhalo esikrinini futhi ngeshwa leli bhokisi lombhalo, yize liphambi kombhalo, awukwazi ukuliphendula. Ukuphela kwento ongayenza ukuguqula ukuqondiswa kombhalo, futhi lokhu kungenye yalezi zinketho ezintathu esizibone kuseli letafula ku-Word 2013 naku-Word 2010. Ngakho-ke le ukuphela kwendlela ongakhetha ngayo lapha, uthola izinhlobo ezintathu ongaziphendukisa umbhalo wakho.
Manje, uma ufuna okukodwa kwalokhu, lokhu kungakusebenzela. Uma ufuna ukuthi umbhalo wakho uzungeziswe ngalolu hlobo lokujikeleza okungama-90 degree, wasebenzise. Bekulokhu kungenye yezinketho esibe nazo; ukuthi nje asikwazi ukuthola ama-degree angama-45 noma lutho ebhokisini lombhalo.
Singasusa imiphetho yebhokisi lombhalo, Uhlaka Lomumo, Alukho Uhlaka. Futhi ukuze ube nombhalo ojikelezayo ekhasini, kepha awubukeki njengawo ebhokisini. Manje inketho yomumo idabukisa ngempela.
Sizokubheka lokhu, kepha kudabukisa kakhulu. Nayi indlela esime ngayo. Ngizobeka umbhalo wami.
Yebo, okokuqala lapho ngiqala ukuthayipha umbhalo wami, awungeni ngaphakathi. Ngidinga ukuchofoza kwesokudla bese ukhetha Faka Umbhalo. Ngiyakwazi ukuzungeza umumo, kodwa ngeshwa umbhalo awuzungezi nawo.
Ihlala ngemuva nje. Ngakho-ke lokhu kubi impela. Ngokusobala, akuyona inketho ongayicabanga.
Ngakho-ke lobu ngumumo kuZwi 2007. Kubuye kube kuZwi 2003. Ngakho-ke kopisha ubujamo.
Ngeke nje bakwenzele wena. Manje sizobuyela ku-WordArt, ngeshwa ebibukeka kabi kabi kuzinguqulo zangaphambilini ze-Word, kepha kuyindlela enhle impela yokuzungezisa umbhalo. Icebo ukuthi, ufuna ngempela ukuqinisekisa ukuthi ukhetha ifonti enhle.
Ngakho-ke ake sibheke ukuthi ngabe enye yezintandokazi zami iMyriad Pro ilapha yini. Ngakho-ke manje senginefonti yami, Rotate yenziwe eMyriad Pro. Anginawo umbala okwamanje kepha lokhu ngingakuthola ngomzuzu.
Nayi into yami ye-WordArt. Kusemuva kwesimo ngakho-ke ake sikuthole. Futhi manje sengingenza izinto ngalo mbhalo.
Okokuqala kufanele ngithole ukugoqwa kokushintshwa kombhalo ngoba kuku-Linewith Text ngokuzenzakalela, kepha uma ngikhetha isikwele noma okunye manje sekuzungeziwe. Futhi ngokungafani nenye inketho yokujikeleza esinayo, lena ijikeleza noma kunjalo, siyayifuna. Ngakho-ke impela i-WordArt iyindlela engcono kakhulu uma ufuna umbhalo ojikelezisiwe kuzinguqulo ze-Word ezindala kune-Word 2010, ngoba ngeshwa injini yehluzo ka-2007 ayishintshwanga.
Manje unikezwa izinketho ezimbalwa lapha. Ungakhetha ukugcwaliswa komumo wakho. Manje ukugcwaliswa kwesimo lapha empeleni izinhlamvu zombhalo.
Akusilo ibhokisi elikulo ngoba empeleni alikho ibhokisi ngemuva kwale-WordArt. Kepha ungakhetha uhlaka, umbhalo. Ungawushintsha ngokwakho umbhalo.
Ungahlela umbhalo. Ungathola imiphumela emihle uma uyiqikelela kakhulu bese uzama ukuthola okuthile okungabukeki njenge-WordArt futhi empeleni okubukeka njengombhalo. Uma ufuna umbala ngemuva kwawo, kufanele ubeke umumo ngemuva kwawo.
Ngakho-ke ake sithole ukwakheka okuyindilinga futhi empeleni sizungezise isimo. Ake sithi sifuna umbhalo wethu ebhokisini elinjengaleli, bese ngibeka ibhokisi lami lombhalo ngesimo se-WordArt bese ngakha umumo ukuze lihlangane. Bengizophendulela laba bobabili ngokushintshana okufanayo bese ngibeka umbhalo ngaphezulu isimo.
amabhukhimakhi e-yahoo anyamalala
Manje seyihambile, konke okumele sikwenze ukuchofoza kwesokudla okukodwa. Kahle ngikwazile ukuthola ifomu ngapha, ngahlela kabusha ukuhleleka kwalo, ngalithumela emuva. Ngakho-ke manje sinesiqephu sombhalo ebhokisini elizungeziswe ku-Word 2007 futhi sakwenza lokho ngento ye-WordArt nesimo esabekwa ngemuva kwaso.
Ngakho-ke kufanele ube nekhono lokudala ku-Word 2007 naku-Word 2003 ukuthola umbhalo ojikelezayo. Inkambu yombhalo iyindlela ongayikhetha uma weneliseka ngomunye wemisebenzi emithathu yokushintshaniswa kombhalo enikeziwe. Ngaphandle kwalokho i-WordArt bese uma udinga ukuyibeka esimweni esigcwele, vele ubeke umumo ngemuva kwayo.
Ngokusobala izinto ziguquka kakhulu nge-Word 2013 ne-Word 2010 futhi sithola zonke lezi zinketho zokujikeleza ebesingenazo kuzinguqulo ezedlule. NginguHelen Bradley. Ngiyabonga ngokungijoyina ngalesi sifundo sifundo.
Funa okwengeziwe okokufundisa ngama-athikili kulesi siteshi se-YouTube bese ucabanga ukubhalisela isiteshi ukuze uzokwaziswa uma kukhishwa ama-athikili amasha. Futhi vakashela iwebhusayithi yami ku-Projectwoman.com ukuthola amanye amathiphu, amaqhinga, kanye nokufundiswa kuzo zonke izinhlobo zezinhlelo zokusebenza zemidwebo, kufaka phakathi iMicrosoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, nokuningi.
Usishintsha kanjani kancane isithombe?
Vula i-Fotor, qhafaza 'Hlela aIsithombe